Announcements | Occasional Events & Parties' Notifications| Myanmar Online
All Categories Business Directory (554) - Free Business Listing (497) - International Business Listings (163) - Website Submission (203) Cars (213) - Car Broker (6) - Car Buyer (1) - Car Seller (205) Education Services (63) - Overseas Education (6) - Training & Classes (56) - Tuition (23) Events (111) - Announcement (107) - Events (6) - Exhibition (3) Fashion and Lifestyle (296) - Beauty & Spa (15) - Books (1) - Clothings (5) - Health (18) - Shopping (249) - Video and Music (14) Food and Beverages (9) - Beverage (3) - Food (5) Hotels and Tourism (26) - Hotels (8) - Myanmar Places (12) - Tour Guide (11) Jobs (111) - Employer Job Offer (101) - Employment Agency (37) - Job Seeker Post (5) Property (106) - Property Agents (40) - Property for Rent (25) - Property for Sale (88) Services (261) - Business Services (164) - Other Services (160) Stuff for Sale (703) - Antiques (2) - Cameras (21) - Electronics (194) - Gadgets (156) - Machinery (37) - Other Stuffs to Sell (363) - Phone Handsets (276) Wanted (527)
Home » Events » Announcement
Listings for Announcement (107)
မကြာခဏပြုလုပ်အပ်သော အထူးအရေးပေါ်ကြေငြာချက်များကို ဤခေါင်းစဉ်အောက်တွင် ထည့်သွင်းပါ။
Valentine Day ချောင်းသာအထူးခရီးစဉ်
Announcement, Hotels and Tourism, Myanmar Places | Always Myanmar | February 11, 2015
Always Myanmar Travels & Tours မှ Valentine Day အထူးခရီးစဉ်အဖြစ် တစ်ဦးလျှင် ၃၇၀၀၀ ကျပ်နှုန်းဖြင့် နေစားစရိတ်ငြိမ်း အထူးသီးသန့်နှစ်ယောက်ခန်းဝန်ဆောင်မှုပေးလျက်...
Announcement, Education Services, Training & Classes | hyperspaceboy | January 20, 2015
Forward Edge's Scholar
Project Management for Engineers and IT Personnel
Announcement, Education Services, Events, Training & Classes | hyperspaceboy | January 9, 2015
စီမံချက်စီမံခန့်ခွဲမှု (Project Management-PM) စီမံချက်တစ်ခုတွင် သတ်မှတ်ကာလအတွင်း ရည်မှန်းချက်ပြည့်မှီအောင် လုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်ဆင့်ကို အသိပညာ၊ အတတ်ပညာ၊ ကျွမ်းကျင်မ...
Friend wanted from Yangon area
Announcement, Wanted | asithgunathilaka | October 29, 2014
Needafriend from Yangon area to collect hand outs and details from Aqua Fisheries exhibition 10-11 th November http://www.myanmar-aquafisheries.com/ Pls...
Announcement, Employer Job Offer, Jobs, Wanted | captjefferystone | September 8, 2014
We are urgently hiring competent,dedicated,Honest,and enterprising applicant who has any of the managerial,technical,Medical, logistics,administrative,and othe...
Announcement, Employer Job Offer, Free Business Listing, International Business Listings, Jobs, Wanted, Website Submission | sairamom | August 19, 2014
Our client is export house. And his all data in hard copy file format. Now his new entry is started in MS excel format. But for all old entry they want to conve...
Internet သုံးနေရင်း အရင်းအနှီး တစ်ပြားမှမလိုပဲ တစ်လကိုငွေ ၁ သိန်းနှင့်အထက်ပ...
Announcement, Employer Job Offer, Free Business Listing, Jobs, Wanted, Website Submission | yln92 | August 15, 2014
ကွန်ပြူတာအရှေ့ မှာထိုင်ပြီး ပိုက်ဆံရှာချင်ပါသလား၊ အင်တာနက်သုံးနေရင်းအသုံးဝင်တဲ့ ပိုက်ဆံရှာနည်းလေးကို မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ။ အချိန်လည်းသိပ်မလိုပဲ ပိုက်ဆံရှာနိုင်သလို က...
Announcement, Property, Property for Sale, Stuff for Sale, Wanted | suwai | August 13, 2014
12.5'×50'အကျယ်​ရှိ6ထပ်​တိုက်​မှ 5လွှာတိုကခန်း၊hall type ,ဝရံတာ ​ကြွေပြား ကပ်​ ၊ပြတင်း​ပေါက်​ပါ၊ မီးဖို​ချောင်​ တခန်းလုံး ​ကြွေပြား ကပ်​၊ အိမ်​သာ ​ရေချိုးခန်း...
Facebook လိုမျိုး အသုံးပြုနိုင်တဲ့ ဒို့မြန်မာ
Announcement, Business Services, Free Business Listing, Other Services, Services, Wanted, Website Submission | doemyanmar | August 8, 2014
သူငယ်ချင်းတို့ရေ ... Facebook လိုမျိုး အသုံးပြုနိုင်တဲ့ မြန်မာ နည်းပညာ၊ မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုတွေနဲ့အညီ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေ တည်ထွင်ဖန်တီးထားတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံပိုင် အဆ...
Announcement, Business Directory, Employer Job Offer, Free Business Listing, Jobs, Wanted, Website Submission | Donghwa | August 4, 2014
၀န်ထမ်း အလိုရှိသည်။ Donghwa Sangsa Co., Ltd. (Korea Auto Parts Distribution Company) - Export/Import Officer ကျား/မ (၂) ဦး - တက္ကသိုလ် တစ်ခုခုမှ ဘွဲ့ရရှိပြီးသ...
ပညာရှာရင်း တစ်ဘက်တစ်လမ်းမှ ၀င်ငွေရှာလိုသူများအတွက် အခွင့်လမ်းကောင်းတစ်ခု
Announcement, Business Services, Education Services, Free Business Listing, Training & Classes, Tuition, Wanted | mawtun | July 29, 2014
- နိုင်ငံတကာ အသိမှတ်ပြု ဒီပလိုမာ ရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။ - တစ်ချိန်တည်းတွင် ဘ၀ရှေ့ရေးအတွက် ခိုင်မာသော လုပ်ငန်းတစ်ခု နှင့် ၀င်ငွေ ရရှိနိုင်သော အခွင့်အရေးတစ်ခုဖြစ်ပါသည...
Announcement, Job Seeker Post, Jobs, Wanted | luckyfamily | July 29, 2014
asia.dream.japan.myanmar@gmail.com(0930095723)လူကြီးမင်းတို့ အားလပ်ချိန်တွင် လူကြီးမင်းတို့၏ ဖုန်း၊ ကွန်ပြူတာ မှတဆင့် အင်တာနက်ပေါ်တွင် ဂျပန်နိုင်ငံမှ ကြော်ငြာအား...
All times are GMT 6.5. The time now is 6:28 pm.